Inona no atao hoe Metrobus? | RayHaber | raillynews
[17 / 02 / 2020] Atrikasa fitaterana Antalya ny 19 febroary	07 Antalya
[17 / 02 / 2020] Lisitry ny fanofana mpiofana momba ny fiaran-dalamby TCDD momba ny lisitra fiofanana sy datin'ny dinidinika	Ankara 06
[17 / 02 / 2020] Mecidiyeköy Mahmutbey Metro test Drive	34 Istanbul
[16 / 02 / 2020] Imamoglu dia nanambara ny daty fanokafana ny Mecidiyekoy Mahmutbey Metro Line	34 Istanbul
[16 / 02 / 2020] Fiaran-dalamby no nitondra ny lalamby 12 metatra halatra tany Kahramanmaraş	46 Kahramanmaras
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulInona no atao hoe Metrobus?
Inona no atao hoe Metrobus?
24 / 01 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, Faritra Marmara, Metrobus, TORKIA
inona ny metrobus
Metrobus dia fitateram-bahoaka fitateram-bahoaka noforonina mitambatra metro sy bus. Miasa amin'ny tady voatokana ho azy io amin'ny kodiarana vita amin'ny vy.
Satria izy io dia zakan-dàlana manokana, afaka mandroso haingana amin'ny fifamoivoizana. Ny metetrobus dia manana fananana lehibe manan-danja sasany raha ampitahaina amin'ny làlana tiany. ireo
Ny halaviran'ny elanelan'ny fijanonana dia lava noho ny rafitry ny bus hafa.
Vonona ny takelaka Izany hoe, ny mpandeha dia mandoa rehefa miditra ny fijanonana. Izany dia manakana ny fiara-bus hiandry ny fandoavana.
Matetika no zotra iray amin'iny làlana BRT iny.
Ny fivoahana avy eo ary raikitra ny varavarana rehetra.
Ny lampihazo tohatra sy ny haavon'ny fiara fitateram-bisy dia mitovy ary tsy misy ny tohatra tohatra hidirana mora ary avy eo amin'ny fihotsahan'ny lalana.
Ny haavon'ny mpandeha fiara dia avo kokoa.
Tsy marina ny mampiasa fiara dobera roa na ambany lenta amin'ireto andalana ireto.
Noho ireo endri-javatra ireo, ny isan'ny mpandeha izay mahazo tombony amin'ny rafitra dia avo noho ny rafitry ny bus hafa. Mandeha haingana kokoa ny dia.
Manana fiara mihoatra ny zotram-pifamoivoizana ireo fiara noho izy ireo, mora kokoa sy haingana kokoa izy ireo satria tsy misy olana momba ny fifamoivoizana.
Ny vidin'ny fotodrafitrasa rafitra Metrobus dia ampiasaina betsaka any amin'ireo firenena mandroso satria be lavitra noho ny metro sy ny rafitra fitateram-bahoaka mitovitovy. Betsaka ny seranam-piaramanidina eran-tany maro no mahazo tombony amin'ny metrobus, indrindra amin'ny famatsiana lalamby sy ny fitaterana lavitra. Any amin'ny firenena sasany, misy ny tambajotra BRT mandroso.
Ny modely amin'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny tsipika BRT dia manana fenitra sasany. Tokony ho fivarotana tokana (hanamora ny fivoahana ny mpandeha), farafaharatsiny iray, arofanina (ho an'ny mpandeha maro kokoa), fifindrana mandeha ho azy (mba hifanaraka amin'ny rafitra fiatoana sy ajanona), ny rafitra fidirana miditra. Ny miketrika any amin'ny firenena sasany dia tsy misy mpamily.
Sarintanin'i Istanbul Metrobus
Metrobus nijanona teny an-dàlana ... Metrobus naka fiainana ... Metrobus dia toy izao, toy izao ny metrobus, inona izany…
Ny Metrobus avy ao Karsan no nandrombaka ny metrobus tifitra tamin'ny IETT Metrobus tender
Inona ny Lisitry ny Vehivavy Fanaraha-maso? (2014-Automobile inspection price screen)
Fifampiraharahana amin'ny fifampiraharahana Inona no atao hoe fangatahana?
Inona ny Rail Systems Engineering?
Inona no atao hoe Railway Transportation?
Inona no atao hoe fiarandalamby haingana?
Inona moa ny fiaran-dalamby Fast
Inona ny Monorail? Iza amin'ireo firenena ampiasainao?
Inona ny tetikasa Transfer Station Sürmene Çamburnu
Inona ny High Speed ​​Train
Inona ny ERTMS / ETCS? - Railway Technologies
Inona no atao hoe Interrail
Inona no atao hoe Metrobus
Androany amin'ny tantara: 24 Janoary 1857 Rumeli Railways
Ireo fiara fitateram-biby amin'ny lalana ao Kocaeli
Atrikasa fitaterana Antalya ny 19 febroary
Eskişehir Chamber of Industry nampidirina Eskişehir any Espaina
Ny lalamby dia nitsidika an'i Kazım Kurt
6 Voarohirohy tamin'ny kolikoly atsofoka ao amin'ny TCDD
Ny Fahatsiarovana ny Tranon-tsambo fotsy Fahatsiarovana an'i Atatürk
Istanbul Bar Association Channel natao mba hanafoanana ny fanapahan-kevitry ny EIA
Fahefana ho an'ny JPMorgan ho an'ny tetezana Osmangazi sy Gebze İzmir Motorway stock Sales
7-Store trano fanamboarana trano fitodiana gebze maoderina vita
Mpiandraikitra ankapobeny vaovao amin'ny orinasa Metro Istanbul
10 Ny firenena no mangataka varotra amin'ny fiara an-trano
Ny orinasa Télali Opel dia lasa foibe fizarana faritra